धेरै महिला पुरुषले भोग्ने केहि यौन समस्या र समाधान – Himal Post | Online News Revolution
प्रहरीभन्दा एनजीओ बलिया ?
ओलीले चाहेर पनि गराउन सक्दैनन् ‘जनमत संग्रह’
टिकापुर हत्याकाण्डको सनसनीपूर्ण खुलासा : प्रहरी मार्दा रेशमले काँधमा हात राखेर बधाई दिएका थिए !
भारत–पाक सीमामा गोलाबारी !
हेलिकोप्टर दुर्घटना: पेस्तोलबाट ३ राउण्ड गोली कसरी पड्कियो ?
himal post २०७५, २७ असार २२:२५ July 11, 2018
शीघ्र स्खलनको समस्या प्रायः सबैले अनुभव गरेका हुन्छन् । चा“डो वीर्य स्खलन हुने समस्या सापेक्षिक कुरा हो । यसलाई परिभाषित गर्न गाह्रो छ । स्वस्थ व्यक्तिको तीन मिनेटमै वीर्य स्खलन हुन्छ भने शीघ्र स्खलन भएको ठान्ने व्यक्तिले २.३२ सेकेन्डमा वीर्य स्खलन हुँदा पनि शिकायत गर्न थाल्छन् । तुलनात्मक रूपमा महिलालाई चरम सुखमा पुग्न ढिलो हुन्छ । त्यसैले पनि पुरुषले शीघ्र स्खलनको अनुभूति गर्छ । कतिपयले भने वीर्य स्खलनअगाडि आउने रसलाई वीर्य ठान्ने र यौन फिल्ममा देखाइएको लामो यौनकार्यको दृश्यबाट प्रभावित भई आपूमा शीघ्र स्खलन भएको शंका गर्छन् ।
यसरी याैन सम्पर्क गर्नुहाेस गर्भ रहदैन